Idozi Egwuregwu Social Media na Nlaghachi na Nkwụnye ego | Martech Zone
Thursday, June 2, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Gary Vaynerchuck na-aghọ ngwa ngwa otu onye mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na m na-akwụsị mgbe niile ige ntị, soro, ma kwenye na ya. Bryan Elliott Na nso nso a gbara Gary ajụjụ ọnụ na usoro abụọ m ga-agba onye ọ bụla nwere azụmaahịa… site na obere ruo CEO… ịge ntị.
Otu isi okwu a gbara m ajụjụ ọnụ - mana ejighi m n'aka na e mesiri ya ike na nyochaa. Gary kwuru banyere ụlọ ọrụ na-etinye hara nhatanha na mgbasa ozi. Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ na-achọkarị ngwa ngwa, mkpọsa nwere nnukwu nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa. Ekwenyere m na azụmaahịa kwesịrị iche n'echiche maka mgbasa ozi mmekọrịta dị iche.
Ekwuru m mgbe niile na ịde blọgụ bụ marathon, ọ bụghị ịgba ọsọ. Enwere m ndị ahịa ugbu a na-enwe nkụda mmụọ n'ihi na, mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ha anaghị ahụ oke nloghachi nke ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ na-ekwupụta. Ha na-ahụ ibu na ọkụ, ọ bụ ezie na… na nke ahụ bụ ihe anyị lekwasịrị anya na ha.
Ọ dị ọtụtụ dị ka itinye ego na akaụntụ ezumike nká gị na ịtụ anya ịla ezumike nká n'ime afọ ole na ole. Ọ nwere ike ime? Echere m na ị nwere ike kụrụ ngwaahịa na-agbapụta .. mana kedụ ohere dị?! Eziokwu bu na ọ bụla tweet, ọ bụla blog post, ọ bụla Facebook nzaghachi… na ụdi na-eso ị na-enweta… bụ obere ego n'ime ọdịnihu nke azụmahịa gị. Kwụsị ịchọ ihe ozugbo.
Dị ka akaụntụ ezumike nka gị, lelee ọnọdụ ndị ahụ ma hụ na ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi. You na-eto eto na-eso? You na-agakwuru ndị mmadụ? Na-enwetakwu aha, mmasị na retweets? Ihe niile a bụ nickel, pennies na dimes na-etinye n'ime akaụntụ nkwụnye ego nke mmekọrịta gị.
M onwe m malitere na mgbasa ozi mgbasa ozi ihe dị ka afọ iri gara aga ma na-etinye ego kwa izu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị kwa ụbọchị. Fọdụ folks na-eju anya etu azụmahịa m si dị ọsọ, DK New Media, toro. Anyị emeela ka ụlọ ọrụ anyị mepee ntakịrị ihe karịa otu afọ wee bụrụ oge zuru ezu maka ọnwa iri na asatọ. Anyị nwere ndị ọrụ oge niile 18 na ihe karịrị ụlọ ọrụ iri na abụọ anyị na ha na-arụkọ ọrụ kwa ụbọchị. Anyị nwere ndị ahịa si New Zealand, Europe niile na North America niile.
Anaghị m ewu ụlọ ọrụ a n’ime otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ. Ewuru m ụlọ ọrụ ahụ n'ime afọ iri gara aga, ma wulite ọkachamara na afọ iri ọzọ tupu nke ahụ. Afọ iri abụọ nke itinye ego na onwe m na ndị obodo m tupu M meghere ọnụ ụzọ azụmahịa m! Ọ na-achọ oge, ndidi, ịdị umeala n'obi pressure na nrụgide na-enweghị nkwụsị iji nwee ihe ịga nke ọma.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị amalite itinye ego n'oge na-adịghị anya, karịa ka oge na-aga, ohere ụlọ ọrụ gị siri ike ma nwee obodo kwesịrị ntụkwasị obi nke ndị ahịa na ndị na-akwado ya dị ukwuu. Bido itinye hara nhatanha na soshal midia taa ma ị gaghị agbaghara. Dị ka Gary si kwuo, mgbanwe ọ bụla na mgbasa ozi nke oge a - site na akwụkwọ akụkọ, na magazin, na redio na telivishọn, nwere ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike imeghari. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ekpebie na ị gaghị etinye ego, nke ahụ dị mma. Ndị asọmpi gị ga-.
Ihe ize ndụ a na-egbu oge. Gbalị ịla ezumike nká na 65 mgbe ịmalitere ịchekwa na 60 anaghị arụ ọrụ. Agaghị etinye ego na mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịgbanwe n'ụzọ ha si ele mgbasa ozi mgbasa ozi anya, nyocha (nke metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya) na ahịa ịntanetị ma ọ bụrụ na ha nọ n'ụlọ iji lanarị echi. Nke a abụghị fad.
Ugboro atọ nke Blog gị na ndị nleta dị mkpa
Jun 8, 2011 na 11:22 AM
Nke a bụ ụzọ m si eche kemgbe izu ole na ole gara aga. Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ echiche gị na nke a ma ghọta na mbọ ndị na-elekọta mmadụ na-ewe oge ọbụlagodi n'ụdị 'zara' ugbu a!
M n'ezie dị blogged banyere nchegbu m tupu m gụọ nke a! M gụghachiri ya mgbe m gụsịrị akwụkwọ gị wee hụ na m dere - "Echere m na akụkụ kachasị njọ nke na-eduzi mgbalị mgbasa ozi ọha na eze na-achọ nsonaazụ ozugbo na ụwa nzaghachi ozugbo! (http://bit.ly/l5Enda).
Daalụ maka post Douglas! Ọ bụ ọtụtụ ekele!
Aug 1, 2012 na 7:58 PM
Ị nwetere ya! Businessesfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ụzọ dị iche. Ee, ọ ga-ewe nnukwu mbọ na oge iji ghaa ihe ị kụrụ.